China Igbe Nkwakọ Ngwaahịa Igbe China Manufacturers & Suppliers & Factory
Igbe Nkwakọ Ngwaahịa Igbe - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Igbe Nkwakọ Ngwaahịa Igbe)
Igbe mpempe akwụkwọ T-uwe na-etinye igbe na mkpuchi Nkwakọ igbe igbe, igbe kaadiboodu nwere mkpuchi, akara ngosi igbochiri edochiri anya gị. Igbe onyinye t-shirt, igbe igbe uwe, akwa na okomoko, nwekwara ike jiri ụta rịbọn. Igbe nkwakọ ngwaahịa igbe nwere mkpuchi, dị mfe imeghe ma ghara ịpụ apụ. Chọrọ ngwaahịa dị mma...
Akwukwo onyinye onyinye igbe di na logo Igbe ndị eji achọ mma, igbe ndị eji achọ ọla na akara ngosi stamping ọla ọcha . Igbe drọd maka ọla, igbe ngwugwu eji achọ mma, okomoko na ezigbo mma . Igbe nkwakọ ngwaahịa, igbe onyinye kaadiboodu maka ihe ndozi, na ntinye ụfụfụ, ọlịghị ụdị . Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ...
igbe ihe eji akpa akwa eji ebu ihe eji agwu akwa
igbe ihe eji akpa akwa eji ebu ihe eji agwu akwa Nke a drawer nkwakọ igbe bụ igbe igbe siri ike, anyị na-eme igbe igbe igbe mpempe akwụkwọ a na igbe akwụkwọ mpịakọta nke akpụrụ akpụ kpuchie ya site na mpempe akwụkwọ okomoko, ụdị igbe ahụ na imewe ahaziri ya, igbe igbe ndị ọzọ dịka igbe igbe, igbe igbe, igbe igbe na...
Igbe nkwakọ ngwaahịa igbe nwere akara maka ọla Igbe drọd maka ọla, igbe ngwugwu ọla, igbe drawer nwere akara . Igbe mpempe ngwaahịa, igbe mpempe akwụkwọ eserese, igbe nkwakọ ngwaahịa maka ọla, ịchọ mma ... Igbe ndị eji achọ mma igbe, igbe kaadiboodu, okomoko na ejiji . Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa...
Igbe onyinye onyinye iberibe ọla edo
Igbe onyinye onyinye iberibe ọla edo Igbe akpa, ngwongwo na-egbochi ọla edo, nke na-enwu na ejiji . Igbe ohiri isi, igbe akpa ngwongwo, igbe ọkpọ onyinye. Igbe onyinye pillow, puru iche. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu ma chọta Li yang Printing, Anyị kpebisiri ike ime ka afọ ju gị, nke ahụ bụ ihe...
Akwukwo onyinye di omimi emere ka odi nma Akwukwo onyinye onyinye di mfe nke edobere nke Akwukwo ahihia di okuko nke eji eme otutu ihe. Akwukwọ Onyinye Mpempe Akwụkwọ nke mpempe akwụkwọ a kapịrị ọnụ na akara ngosi dị ọcha na iji aka mbipụta ebipụta ya. Kwakọba Pillow Box na igbe dị mma nke na-enweghị ike ibugharị na...
Igbe nkwakọ ngwaahịa omenala na akpa akwụkwọ
Igbe nkwakọ ngwaahịa omenala na akpa akwụkwọ Igbe nkwakọ ngwaahịa omenala, igbe akwa pink na teepu matte, okomoko na ejiji . Igbe mpempe akwụkwọ omenala , igbe ngwugwu ọla na ntinye, nwere ike igosi ngwaahịa gị nke ọma. Igbe nkwakọ ngwaahịa igbe , igbe onyinye maka ọla, na njirimara gị, juputara na ụlọ ọrụ...
Akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa igbe nke ọla na nke ala
Top na Bottom Silver Texture Akwụkwọ Akwụkwọ ọla Nkwakọ ngwaahịa igbe ọla dị mma na ụdị isi na ezigbo mma, ihe a bụ 1000gsm akwụkwọ akwụkwọ nha ịha akwụkwọ 1.5mm, mpempe akwụkwọ ọlaọcha igbe igbe a na-achọ mma karịa, a na-eji ya maka oriri agbamakwụkwọ ma ọ bụ itinye aka, anyị na-anabata ahaziri ahaziri, nke dị iche ,...
Igbe Nkwakọ ngwaahịa Kwesịrị Ekwentị Igbe mpempe akwụkwọ Pen nke ejiri ihe mkpuchi 250-400gsm mee ihe mkpuchi ; Mkpịsị akwụkwọ mkpịsị ederede na- adọkpụsị ụdị nke na-etinye otu mkpịsị ugodi nke nwere ike iburu ngwongwo dị larịị . Foldable p en igbe nabatara ahaziri size na imewe-ebi akwụkwọ. Achọrọ nkọwa zuru ezu iji...
Black drawer packaging belt package Igbe mpempe akwụkwọ Belt bụ Ejiri kaadi ojii na akwukwo kaadiboodu, acha ga-acha oji, aja aja, CMYK ma obu ahaziri ya, akara ngosi mazi ola edo ma o bu akara eji ahaziri ndi mmadu aka. Enwere ike iji ya maka ịkwado belt, akwa uwe, uwe, ụta ụta na nkwakọ ngwaahịa onyinye. Liyang...
Igbe mpempe akwụkwọ eji achọ ihe eji achọ mma The ọla nkwakọ igbe ejiri akwukwo na akwukwo ihe eji eme ya. A na- eji igbe a na- adọta igbe maka ọla, akwa nhicha, sock, elekere, ect. Ọ dị m mfe iwepụ. Igbe ya na ijiji eme ihe dabara adaba na ngwaahịa gị ma mee ka ndị ahịa nwee echiche miri emi banyere ngwaahịa gị. Anyị...
Igbe Ngosiputa Kaadi Koodu Mara Mma
Omenala Ego Ngosiputa Kaadi Koodu Mpempe Akwụkwọ Ziri Ezi Igbe ngosipụta nke bọọdụ mpempe akwụkwọ siri ike nke mpempe akwụkwọ siri ike mpempe akwụkwọ 2-7mm ; Igbe ngosipụta etemeete na CMYK akwụkwọ eji agbapụta agba zuru oke maka ịkwakọ ngwaahịa na ihe ngosi .Recycled ngosi igbe kaadiboodu. nara udi ihe eji eme ya;...
Igbe nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma nke edere edere
Nkwakọ ngwaahịa: Mbukota nke A = A / K = K bọọdụ mpempe akwụkwọ
Inye Ike: 10000000/month
Liyang Paper Products Co., Ltd, e guzobere na 1999, ọkachamara na imepụta ngwaahịa dị iche iche na mpempe akwụkwọ. Dị ka igbe onyinye, akpa onyinye, akpa ịzụ ahịa, ibi akwụkwọ kaadị onyinye, folda, envelopu, mbipụta akwụkwọ, akwụkwọ ndetu, igbe ọmarịcha, igbe ozu, na nnukwu ndị ọrụ 60 dị elu na ndị ọrụ ihe karịrị 350...
ọnụ ala kraft akwụkwọ obere igbe onyinye
Igbe mpempe akwụkwọ OEM
Nkwakọ ngwaahịa: juru eju na A = A / K = K correks nke mbupụ
Igbe mpempe akwụkwọ OEM Igbe mpempe akwụkwọ ngwaọrụ bụ igbe kaadiboodu siri ike, anyị na-eme ya na mkpuchi dị mfe na igbe igbe dị na-enweghị ma ọ bụ na njiri akara gị na mbipụta agba na agba dị iche iche na mpụga igbe, a na-eme igbe igbe na imewe, igbe igbe ndị ọzọ dị ka igbe igbe, igbe igbe. igbe akpọrọ igbe na igbe...
e biri ebi akara kandụl igbe nke a mara mma na igbe swiiti pụrụ iche, mmechi dị ka ifuru dị na ifuru dock ala, a na-eji ya maka swiiti ma ọ bụ swiiti agbamakwụkwọ, nha dị ka ihe ịchọrọ ime, ihe bụ 350gsm art akwụkwọ, moq bụ 1000pcs, ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ịnabata ịkpọtụrụ m! Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ...
Igbe kuki na-acha uhie uhie igbe igbe akwụkwọ nri Igbe a na-acha uhie uhie nke nwere agba abụọ, kwa oyi akwa ya na akwụkwọ nkewa maka ihe, ị nwere ike itinye chocolate, swiiti, nri nwere ihe dị iche iche n’ime, matt lamiantion coated, 2mm paperboard, gold foil logo foil. igbe dị na igbe kuki dị egwu! Liyang Paper...
Igbe mpempe akwụkwọ ndobe Anya Oku
Igbe mpempe akwụkwọ ndobe Anya Oku Onyinye ihe eji eme ahia bu akpukpo ahiri onyinye. Akwụkwọ mpịakọta 1mm gbara ọkpụrụkpụ na mkpuchi na okpu abụọ nke mpempe akwụkwọ mkpuchi cylinder igbe abụọ. Igbe oke na akuku ala nwere ike ime site na igwe na imecha ngwa ngwa. Achịcha mmiri na-egbochi mmiri. Liyang Paper ngwaahịa...
Nkwakọ ngwaahịa akpa akpa Pink dị mma
Nkwakọ ngwaahịa: K = K Katoodu Kaadị Edekọtara Ihe
Nkwakọ ngwaahịa akpa akpa Pink dị mma Nkwakọ ngwaahịa lipstick pink bụ akpa akpa, nha bụ 9x5.5x7CM, pere mpe naanị maka otu lipstick, aka ahụ bụ pink ribboon dakọtara mee ka igbe dum dị ọmarịcha ma na-ele anya, ọ bụrụ na ịchọrọ itinye akara ngosi gị, nke ahụ dị oke mma, ị nwere ike embossed , stampoing na-ekpo ọkụ wdg...
Igbe onyinye ọla edo edo edo edo edobere maka Ladies
Igbe onyinye ọla edo pink edobere maka Ladies & Girls Igbe ọla edo edo mara mma sitere na mgbanaka, mgbaaka, mgbaaka, ọla ntị wdg, akwụkwọ ozi pink pink na velvet liner, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye akara ngosi gị, nke ahụ dị oke mma, ịnwere ike emboss, hot stampoing wdg mmetụta dị iche iche! Liyang Paper ngwaahịa...
igbe onyinye ndọta na mmechi magnet
igbe onyinye ndọta na mmechi magnet Nke a bụ akwụkwọ akwụkwọ igbe nwere magnetik & rịbọn mmechi, n'ime ya bụ odo dị ka inlay iji jide ihe, ihe ahụ nwere ike ịbụ iko kandụl, etemeete, ịchafụ, ndọtị ntutu ọbụna mmanya wdg. ụdị igbe igbe ọfụma, mpempe akwụkwọ mpịakọta ya na mmechi rịbọn, ọcha nwere akara ojii....
igbe mpempe akwụkwọ anụ ahụ mkpuchi na isi
igbe mpempe akwụkwọ anụ ahụ mkpuchi na isi N’akụkụ ebe a na- ere mmanụ, ụlọ ahịa nri na- ewu ewu karị iji igbe igbe akwụkwọ, nke a bụ ebe enyi na-adị mma, igbe mpempe akwụkwọ ahụ nwere ike ibipụta agba ọ bụla, nke a bụ ụdị mgbasa ozi ọzọ maka ụlọ ahịa gị, mpempe akwụkwọ mpịakọta nwere akara mkpuchi akara, Mgbe ịchọrọ...
igbe mpempe slid na aka uwe maka ngwaahịa nlekọta anụ
igbe mpempe drawer na apịachi aka maka ngwaahịa nlekọta anụ Aka uwe na-acha akwụkwọ ndụ na igbe dị n'okpuru, ihe dị mfe ma na-ahụ anya pụrụ iche maka ngwaahịa nlekọta anụ, ihe a bụkwa 300gsm art art white, ọ nwere ike ịbụ mbupu mbugharị, mgbe ịkwesịrị iji, wee gbakọta ya iji tinye ngwaahịa gị n'ime, the...
Igbe katọn ojii siri ike maka ọla
Igbe katọn ojii siri ike maka ọla Igbe klọọkụ ojii ahụ bụ imewe klaasị, n'èzí & n'ime ma kaadị ojii, A na-eji akwụkwọ mmado 1.5mm nweta, njikwa elu ahụ bụ arịrịọ gị, njirimara bụ akara ngosi ọla edo, ihe niile dị mma! emebere ihe niile ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị igbe igbe ọmarịcha okomoko, ịnabata ịkpọtụrụ...
Igbe Nkwakọ Ngwaahịa Igbe Igbe Nkwakọ ngwaahịa Igbe Igbe Nkwakọ ngwaahịa igbe Igbe Nkwakọ ngwaahịa Ike Igbe nkwakọ ngwaahịa igbe Igbe Nkwakọ ngwaahịa Obere Igbe Nkwakọ ngwaahịa Led Nkwakọ ngwaahịa Igbe